Kaararkani wuxuu isticmaalaa Twitter si uu u helo astaamaha ugu caansan ee 'Game of Thrones' ee gobolkaaga: BGR. - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » madadaalo Kaararkani wuxuu isticmaalaa Twitter si uu u helo astaamaha ugu caansan ee 'Game of Thrones' ee gobolkaaga: BGR.
Kaararkani wuxuu isticmaalaa Twitter si uu u helo astaamaha ugu caansan ee 'Game of Thrones' ee gobolkaaga: BGR.
Dhowr maalmood ka hor imaanshada sideedaad iyo xilli hore Game of Thrones Looma baahna in la xusuusto inta jeer ee HBO ee taxane fantastik fantastik ah ay caan ku noqotay sannadihii la soo dhaafay. Midka koowaad ee roogga cas dhowr maalmood ka hor at Radio City Music Hall dhacdada ugu horeysa ee xilli-ciyaareedka cusub waxay bixisay tusaale kale oo ah awoodda dhaqameed ee ka soo baxday.
Dhanka kale, dadka halkaa jooga ] daringplanet.com ayaa go'aansaday in ay soo gudbiyaan xogta la adeegsan karo ee Twitter-ka ah si ay isugu daydo inay qiyaasaan sumcada bandhigga. Isticmaalka xogta ad ka badan tweets 200 000 bishii la soo dhaafay, waxayna raaceen weedhaha of Ciyaarta Taararka ee 50 US waxay sheegaysaa inay isku daydo inay aqoonsato muwaadiniinta ugu caansan Westeros. natiijooyinka kaashka ah ee loogu talagalay astaamaha ugu muhiimsan ee taxanaha ayaa ku yaabi kara. Isticmaalka kuwaas sheegaye Twitter, ugu cadcad qaar ka mid ah sida Jaime Lannister, Bran Stark, Brienne ee Tarth iyo Hound ayaa ku guuleystay gobol kasta, sida aad ka arki kartaa map of Liibaanay sare ee this post. characters kale, Dhanka kale, ma xitaa ururin Twitter ku filan in la tixgeliyo in gobolada oo dhan.
Dhinaca kale, tirada ugu wada hadleen, 19 guuleysan dalalka - garaaceen cadcad sida Jon Snow iyo Daenerys Targaryen. - wuxuu ahaa Stark gabadhiisa ugu yar, Arya.
Dabcan, tani ma aha qiyaasta saxda ah ee xaddiga maskaxda helay . Shaqaalaha daringplanet.com ayaa dhab ahaantii go'aansaday in la sameeyo jimicsi layli xiiso leh ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub - taas oo, haddii ay dhacdo aad ilowday ama haddii kale iska indho, waxaa la qaban doonaa on Sunday, April 14 HBO.
Isha laga helay image: Daringplanet.com
Endgame 'waxaa laga yaabaa inuu u socdo mid ka mid ah xafiisyada ugu weyn Mareykanka ee BGR
Kalluumeysiga Endgame ayaa noo sheegi kara goorta Bruce Banner ugu dambeyntii soo baxday - BGR